Ukuphupha kwentombazana Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Intombazana ngumntu obhinqileyo ongekafiki ebudaleni. Ngokubanzi, ibhekisa emntwaneni okanye kumntu omncinci ukuya kwi-18 yeminyaka ubudala. Eli gama livela kwigama elithi "umkhonzi" wamaxesha aphakathi; Ngenxa yoko, de kwaba yinkulungwane yama-XNUMX, abasebenzi basekhaya babebizwa ngokuba ngamantombazana. Abahlobo abancinci bamadoda amadala kakhulu nabo bagxothwa "njengamantombazana," "amantombazana amancinci," okanye "nje kancinci." Kwangelo xesha, amagama afana "nenyosi ephilayo" okanye "ubumnandi" aqhelekile, anombala wesini. Nokuba amantombazana amancinci ngamanye amaxesha abizwa ngokuba "ziintlanzi," ngakumbi i-cheeky "brats" okanye ngokulula "iibrats."
Namhlanje, uphando lwamantombazana lujongana nemeko yenkcubeko, yezopolitiko neyentlalo yophuhliso lwendima.
Ukuba ukhe wayibona intombazana ngelixa ilele okanye wazibonela ulusu, umbuzo onomdla ngowokuba umfanekiso wephupha wawenzelwe ukubonisa ntoni. Ngaba yimemori yobuntwana nje yomfazi okanye ngaba kuninzi? Sishwankathele ezona ndlela zibalulekileyo zokuchazwa kwamaphupha ophawu "lwentombazana" kuwe:
1 Uphawu lwephupha «intombazana» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intombazana» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intombazana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intombazana» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha «intombazana» inokuthi ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha kwi Ukuziphatha ngokwesini okanye ubonise uthando olusisiqalo. Kananjalo, iphupha elinje libhekisa kwiimpawu ezamkelekileyo zobuntu ezinje ngovelwano, uhlengahlengiso kunye nokukhathalela.
Kwezinye iimeko, ephupheni lentombazana, iphupha linokuchaphazeleka ngokulula el mundo yomlindo. Ke ngoko, kufuneka uziqwalasele ngokusondeleyo ukuze ubone ukuba wenza nini ngokuhambelana neminqweno yakho kwaye ngokuhambelana neminqweno yabanye.
Ukuba intombazana ebonwe ephupheni isencinci, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kuyalutolika olu phawu luphupha njengophawu lokulula. Ulawulo yokuphupha. Inokuphenjelelwa ngokukhawuleza kwaye ngokulula kwihlabathi leewotshi okanye ibekwe ecaleni. Ukongeza, oku kubonisa ukuba iphupha linokuchazwa ngokungachanekanga okanye unoluvo lokuba abanye baya kumenzela izigqibo.
Ukudlala ngothando nentombazana entle ephupheni kuhlala kubhekisa ngokungafunekiyo Ukuchitha imali kwihlabathi elivukayo. Ukwanga kwentombazana ephupheni kufuna ukuba umntu ophuphayo aqonde ukuba uyahlekisa ukuba akayinqandi iminqweno yakhe yesini kwihlabathi elivukayo.
Ukuba intombazana ivela ephupheni lomntu, inokubonisa nokuba ayikakhuli, ihlala inesibindi kwiminqweno yesini, engathathelwa ngqalelo ngokupheleleyo ekuvukeni kobomi. Amantombazana ahlala esikolweni ahlala ebhekisa kubunzima kwicandelo lobugcisa njengomfanekiso wephupha.
Uphawu lwephupha «intombazana» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kutolika uphawu lwephupha "intombazana" njengophawu lwe Imizamo uphupha ukuseka unxibelelwano necala lakho elibuthathaka nelimsulwa. Ubuchule bakho obubonakalayo bunokungaphuhliswa kakuhle, kodwa ungabasebenzisa ngoku.
Kuyathakazelisa ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha nokuba iphupha lidibana nentombazana yephupha lakho okanye hayi. Ukuba udibana nentombazana yamaphupha akho, sele uyazi ezi mpawu, kodwa kuya kufuneka ujonge kwelinye icala.
Nangona kunjalo, ukuba awuyazi intombazana ephupheni, awunakufikelela kula maphepha abalinganiswa okwangoku. Kuya kufuneka uzame ukuyifumana ngokukhawuleza kwilizwe labalindi.
Kwiphupha lamadoda, uphawu lwephupha «intombazana» lukwabonwa njengophawu lokonwaba kunye nolutsha olutsha, olunqwenelwa liphupha ebomini bokwenyani. Kwimeko yabafazi, kwelinye icala, intombazana njengophawu lwephupha ihlala ibhekisa kowayo Indawo yokuhlala okanye umnqweno wokungakhathali.
Ukuba umfazi ophuphayo uzibona eyintombazana ephupheni, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, uloyiko lokuphulukana nomtsalane kwindoda yakhe, nakwamanye amadoda, kuyaboniswa. Ukuba intombazana ephuphayo ithwala isikhafu, iphupha elo linokucinga nje ngobomi balo bothando. Ukudlala ngothando kunokudlala indima apha.
Uphawu lwephupha «intombazana» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "intombazana" lithetha Umgangatho we-Yin okanye ngendalo kunye neempawu ezamkelekileyo.